प्लस टु पछिको गन्तव्य-२
एमबीबीएसको तिर्सना ‘बीएमएलटी’ ल्याबदेखि क्लिनिकसम्म अवसर
दिनेश गौतम काठमाडौं, १४ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटोरी टेक्नोलोजी (BMLT) बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीएमएलटी ?
व्यक्ति दिन प्रतिदिन विभिन्न रोगको सिकार हुँदै गएको छ । यही परिस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर रोग नियन्त्रण गर्न बीएमएलटी शिक्षा सुरुवात गरिएको हो ।
बीएमएलटीको पूरा रुप ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटोरी टेक्नोलोजी हो । स्वास्थ्य संस्थाको प्याथोलोजी विभागमा रहेर यान्त्रिक प्रविधिबाट रोगको पहिचान गर्ने व्यक्तिलाई ल्याब टेक्नोलोजिस्ट भनिन्छ ।
ल्याब टेक्नोलोजिस्टले नै बिरामीको रगत, खकार, दिसा, पिसाब, रौं, छाला, बोनम्यारोलगायत परीक्षण गर्छन् । परीक्षण गरेपछि रोग के कारणले लागेको हो, सो पत्ता लाग्छ । परीक्षणमा सही नतिजा आएन भने बिरामीको उचित उपचार नहुन सक्छ ।
सही परीक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने काम ल्याब टेक्नोलोजिस्टको हो । त्यसपछि मात्र चिकित्सकले उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेका विद्यार्थीले पढ्ने विषय हो यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएर सरकारी र निजी क्याम्पसले यो कोर्स पढाउन सुरु गरेका छन् । यो चार वर्षे कोर्स हो । चार वर्षमा आठ वटा सेमेस्टरमा पढाइ हुने गरेको छ । एक सेमेस्टरमा ४० जनाको मात्र कोटा हुन्छ ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेकाले
सीटीईभीटीबाट सीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स पढेकाले
जीपीए २.४ वा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको
बीएमएलटी नै किन पढ्ने ?
ल्याब टेक्नोलोजिस्ट बन्न
रोगको पहिचान तथा परीक्षण गर्न
खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न
कुन क्षेत्रमा काम पाइन्छ ? अवसर के कस्ता छन् ?
अस्पतालमा (सरकारी र निजी)
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा
खाद्य वस्तु उत्पादन केन्द्र
आफैंले ल्याब खोल्न सकिने
ल्याबका विषयमा पढाउन पनि सकिने
रोगको परीक्षण गर्ने
ब्लड क्रस म्याच गर्ने
प्याथोलोजी विभागकोे इन्चार्ज भएर काम गर्ने
प्याथोलोजीमा रहेका उपकरण ठीक छ या छैन, पहिचान गर्ने
रोग पत्ता लागेपछि हस्ताक्षर गर्ने
खाद्य वस्तुको उपयुक्तता पहिचान गर्ने
खाद्य वस्तुमा कीटाणु छ या छैन भनी अनुसन्धान गर्ने
खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने
शान्त स्वभाव भएकाले,
कोठाभित्र बसेर काम गर्न मन पराउनेले,
स्वास्थ्यसम्बन्धी रुचि भएकाले,
बीएमएलटी कोर्स पढ्न कम्तीमा १२ लाख खर्च हुन्छ । तर, शुल्कमा क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा केही तलमाथि हुन सक्छ । पढाइबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क सोही आधारमा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
विश्वविद्यालयको नियमअनुसार प्रत्येक क्याम्पसले चार जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन्छन् । छात्रवृत्तिका लागि विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा लिन्छ । परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याउने चार जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन् । विश्वविद्यालयले छनोट गरेर सम्बन्धित क्याम्पसमा नाम पठाएपछि ती विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । सरकारी विद्यालयमा पढेकाले छात्रवृत्तिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् ।
मेडिकलसँग सम्बन्धित विषय भएकाले इन्टर्नसिप अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । ५० प्रतिशत सिद्धान्त (Theory) र ५० प्रतिशत प्रयोगात्मक (Practical) हुन्छ । कसरी परीक्षण गर्ने र रोग कसरी पत्ता लगाउने भन्ने जानकारी इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ त्यसैले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, रिसर्च सेन्टर र खाद्य वस्तु उत्पादन कम्पनीमा गएर इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस, काठमाडौं
मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, काठमाडौं
मोेर्डन टेक्निकल कलेज, सानेपा, ललितपुर
पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरा
स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढ्दो छ त्यसैले पढाइ सकिएलगत्तै रोजगारी पाइने सम्भावना धेरै छ । बीएमएलटी पढ्नेहरु बेरोजगार हुँदैनन् । सुरुवातमा ३०–५० हजारसम्म मासिक आम्दानी गर्न सकिन्छ । काम गर्दै गएपछि तलब पनि बढ्दै जाने भएकाले नेपालमै बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
बीएमएलटी पढेपछि विदेश जान सहज हुन्छ । अन्य विषयभन्दा मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीको भिसा छिटो लाग्ने सम्भावना हुन्छ । बीएमएलटीपछि मास्टर्स गर्न विदेश जाने हो भने पनि छात्रवृत्ति पाइन्छ । चीन, जापान, बंगलादेशलगायतका देशले छात्रवृत्तिमा नेपाली विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छन् ।
विश्व बजारमा ल्याब टेक्नोलोजिस्टको माग धेरै नै छ । नेपालका ग्रामीण भेगमा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् । ती क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य संस्था खुल्न थालेका छन् । त्यहाँ ल्याब टेक्नोलोजिस्ट चाहिने भएकाले यसको माग निकै छ ।
त्यस्तै, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा अस्पताल खुल्ने क्रममा जारी छ । चिकित्सक र नर्स भएर मात्र हुँदैन । अस्पतालमा रोगको पहिचान गर्ने ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पनि आवश्यक पर्छ त्यसैले बजारमा यसको माग धेरै छ ।
विज्ञको नजरमा बीएमएलटी
दक्ष टेक्नोलोजिस्ट उत्पादन हुन्छन्
गोविन्द पौडेलः प्रधानाध्यापक, मोर्डन टेक्निकल कलेज
नेपालमा अझै नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिरै छन् । सहरी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै अस्पताल खुल्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्था भए पनि त्यहाँ दक्ष टेक्नोलोजिस्ट छैनन् । यसकारण, प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सहरी क्षेत्रमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।
यदि ग्रामीण क्षेत्रमै रहेका स्वास्थ्य संस्थामा रोगको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो भने उपचारका लागि सहर आउनुपर्दैनथ्यो । सहरमा पनि प्रविधि नहुँदा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य सेवा जटिल र महँगो हुँदै गएको छ । आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।
अहिले स्थानीय तहमा अनिवार्य स्वास्थ्य संस्था भनिएको छ । ती संस्थामा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट अनिवार्य चाहिन्छ । दक्ष ल्याब टेक्नोलोजिस्ट उत्पादन गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमै रोगको पहिचान गरेर उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारका लागि सहर र विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
नवलकिशोर यादव : ल्याब टेक्नोलोजिस्ट
बीएमएलटी अध्ययन पछि नाम र दाम कमाउन सकिन्छ । बीएमएलटी पढेकाले पनि नाम र दाम कमाउन सफल भएको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
नवलकिशोर यादव गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा ल्याब टेक्नोलोजिस्टका रुपमा कार्यरत छन् । सानैदेखि नै मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि भएका कारण उनले बीएमएलटी पढे । उनी अस्पतालको प्याथोलोजी विभागमा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट भएर काम गरिरहेका छन् ।
‘सानैदेखिको रुचिको विषय भएकाले यही विषय पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘पढाइअनुसारको काम र दाम पाएको छु । तर, लोकसेवाले ल्याब टेक्नोलोजिस्टको दरबन्दी कम माग्ने गरेको छ ।’
कामप्रति गर्व हुन्छ
श्याम जोशी : ल्याब टेक्नोलोजिस्ट
बैतडीमा जन्मिएका श्याम जोशी सानैदेखि मेडिकल क्षेत्रमै काम गर्न चाहन्थे । उनी सपना पू्रा गर्न काठमाडौं आए । काठमाडौंबाट नै उनले बीएमएलटी अध्ययन गरे । अहिले उनी मेडिसिटी अस्पतालको प्योथोलोजी डिपार्टमा काम गर्छन् ।
‘सानैदेखिको सपना पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशकै अस्पतालमा काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । रोग पत्ता नलागेसम्म डाक्टरले पनि उपचार गर्न सक्दैनन्, रोग पत्ता लगाउने काम ल्याब टेक्नोलोजिस्ट र प्याथोलोजिस्टको हो । त्यसैले आफ्नो कामप्रति गर्व छ ।’
नेपालमा दक्ष ल्याब टेक्नोलोजिस्ट छन्
डा. अमर नागिला, सह–प्राध्यापक, पोखरा विश्वविद्यालय
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा बीएमएलटी पढाइ हुने गरेको छ । अहिलेसम्म उत्पादित ल्याब टेक्नोलोजिस्ट कोही पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छैन । तर, कतिपय क्याम्पसले राम्रोसँग पढाइ सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
यस कारण, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य क्षेत्र विवादमा देखिने गरेको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएर राम्रो काम गर्न नसकेका उदाहरण पनि छन् । यी सबै समस्यालाई हल गर्र्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो । बिरामीलाई के रोग लागेको हो भन्ने पत्ता लगाउनु चुनौतीको विषय हो ।
यो चुनौतीको सामना गर्न नेपालमा राम्रो ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पनि उत्पादन भएका छन् । विश्वविद्यालयमा बीएमएलटी पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघमा अस्पताल खोल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । ती अस्पतालमा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय तहमा १५ शय्याको ७ सय ५१ वटा स्वास्थ्य संस्था खुल्ने तयारी हुँदै छ । प्रदेश र केन्द्रमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सुविधासम्पन्न अस्पताल खुल्ने क्रम बढेको छ त्यसैले दक्ष ल्याब टेक्नोलोजिस्ट उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १४, २०७६, १८:४९:००